Imigaqo yeGestalt kuyilo lwegraphic | Abadali be-Intanethi
Iris Gamen | | Ihlaziywe 15/03/2022 19:04 | Idizayini yeMifanekiso
Umthombo: Ukuphila Ngempilo
Kwihlabathi loyilo kunye nezobugcisa, kubaluleke kakhulu ukuqwalasela i-psychology, ekubeni ngayo sinokudlulisa iimvakalelo kwaye sicenge uluntu, ukongeza ekuqondeni indlela ababona ngayo umyalezo othunyelwe kubo.
Kule nqaku, siza kuthetha Imigaqo yeGestalt kuyilo lwegraphic, kunye nendlela ezisisixhobo esiluncedo ngayo ukuqonda indlela imbono ebonwayo isebenza ngayo, kunye nokuba kutheni ezinye izinto ezibonakalayo zisebenza ngendlela enye okanye enye.
Siza kufumanisa ukuba zithini na imithetho eyahlukeneyo ejikeleze iGestalt, kwaye siya kubeka imizekelo yabo kwihlabathi loyilo kunye nentengiso.
1 Yintoni iGestalt?
2 Imithetho yeGestalt
2.1 umgaqo ofanayo
2.2 Umgaqo wokuqhubekeka
2.3 umgaqo wokuvala
2.4 umgaqo wokusondela
2.5 Umgaqo womfanekiso kunye nomhlaba
2.6 umgaqo wolingano
Ithiyori yeGestalt okanye ipsychology yefomu, yindlela yengqondo eyavela eJamani malunga no-1920, kwaye oko. imigaqo yayo isekelwe kwinkcazo-bungcali yokubona. Imigaqo eqokelelwa yiGestalt iye yavela ngokuhamba kwexesha enkosi kubaphandi abaninzi.
Ehlabathini loyilo, kuqheleke kakhulu ukuba kuthathelwe ingqalelo imigaqo emithandathu esisiseko yembono yokubona esiboniswa yiGestalt xa siyilwa, kuba ngayo sinokwenza uyilo olubandakanya ababukeli.
Siza kugxila kwi Imigaqo emithandathu esetyenziswa kakhulu kwihlabathi loyilo kwaye siya kuqonda kwaye siqonde ngokukhawuleza okukhulu.
Umgaqo ofanayo uya kubonakala xa izinto ezibonwayo zibonakala zifana enye kwenye, oku kukhokelela ekubeni umbukeli ayibone njengento elungeleleneyo yonke.
Izinto zabelana ngezinto ezibonakalayo ezifana nombala, imilo, ubukhulu, njl. Okukhona oku kufana okukhulu, kokukhona kuhambelana ngokupheleleyo.
Lo mgaqo ukhoyo kumfanekiso omdala weMulberry, indlu yefashoni yesikhumba. I-logo iphefumlelwe yimithi ye-mulberry eyabonwa ngumdali we-brand endleleni eya esikolweni. Ukugxila kulo mfanekiso kulapho sibona khona ukuba lo mgaqo uvela kuba basebenzisa iimilo ezisisiseko ezibhekiselele phezulu komthi.
Kulo mgaqo, liliso elibonakala lidala ukuqhubeka komgca, ngokuqhelekileyo kwimigca egobileyo, ezi zinto zibonwa ngendlela ehambelanayo nangona kukho ikhefu kulo mgca.
Kuyilo, lo mgaqo ungasetyenziselwa ukwalathisa ukujonga kwethu ngokusetyenziswa kwento yomntwana. Sakuba sigxininise amehlo ethu, sibhekisa amehlo ethu kwicala elisiphawulayo.
Umzekelo ocacileyo walo mgaqo luphawu lweCoca Cola, apho sibona khona ukuba uC wayo wokuqala ngulowo uphawula indlela ekufuneka amehlo ethu ehambe ngayo, kwenzeka okufanayo nakwinkunzi yesibini uC.
Umgaqo wokuvala kwenzeka xa umfanekiso awuphelelanga okanye awuvalwanga kakuhle, kwaye bubuchopho bethu obuvala ezo zithuba xa uzibona. Iimilo ezivaliweyo zibonwa njengemilo ezinzile ngakumbi, kwaye yiyo loo nto ingqondo yethu ithande ukugqibezela umfanekiso.
Bubuchule obusetyenziswa ngokubanzi kwihlabathi lobugcisa kwaye omnye woovulindlela balo babalaseleyo ligcisa elaziwayo kwihlabathi iBanksy. Kulo msebenzi nguBanksy, usebenzisa umgaqo wokuvala ukudala umzobo wentombazana kunye nebhaluni, nangona imilo yazo zombini izakhi ingavalwanga ngokupheleleyo, yingqondo yethu eyenza.
Sinokuyibona kwakhona kwi-logo ye-Champions League, ingqondo yethu ijongene nokuvala umfanekiso kunye nokudala umfanekiso webhola.
Lo mgaqo usekelwe kwingcamango yokuba izinto ezibekwe kufutshane zithande ukubonwa njengeseti nokuzahlula, nokuzahlula kwabanye. Umbutho weqela wenziwa phakathi kwezinto ezifanayo.
Ukuze umbutho weqela ubekho, izinto kufuneka babelane ngeempawu ezifanayo omnye komnye, njengemilo, ubungakanani, umbala, ukuthungwa, phakathi kweminye imiba yokubonwayo.
Omnye weyona mizekelo icacileyo apho sinokujonga khona lo mgaqo ukwilogo ye-Unilever, apho sinokubona ukuba izinto ezenza umfanekiso wayo zabelana ngezinto ezibonwayo ezifana nobukhulu, umbala kunye nobukhulu.
Umgaqo womfanekiso kunye nomhlaba
Lo mgaqo ubandakanya ingcamango yokuba iliso lidla ngokubona into ngokwahlula indawo eyingqongileyo, yahlula izinto eziyingqongileyo.
Umzobo uya kuba yinto ekwisithuba kwaye imele ngaphandle kwezinye izinto, kwelinye icala, imvelaphi yiyo yonke into engeyiyo isibalo. Ngamehlo ethu afuna ukubona umzobo kwaye ashiye imvelaphi ngasemva.
Umzekelo esiwubonileyo sonke ngumfanekiso apho sinokubona isibane sekhandlela esenziwe ngobuso obubini kwiprofayili. Kuyilo lwegraphic, sihlala sifumana lo mgaqo kwiipowusta, njengale ingezantsi isuka kuNoma Bar kunye nomyili uTanya Holbrook, we-IBM.
Lo mgaqo uthi izinto ezibonakalayo kufuneka zicwangciswe kwaye zilingane, abafanele banike imvakalelo yokuphazamiseka okanye yokungalungelelani, ekubeni ababukeli bengayi kusiqonda isigidimi ofuna ukusidlulisela.
Isimboli soxolo njengoko sisazi namhlanje, kodwa ngokwenene sadalwa njengophawu lwezixhobo zenyukliya, ezenziwe nguGerald Holtom ngo-1958 ngumzekelo womthetho wokulinganisa.
Njengoko ubonile, Imigaqo yeGestalt ikhona kakhulu kwihlabathi loyilo kunye nobugcisa. Ukuze uyilo lusebenze ngokufanelekileyo kufuneka luqondwe ngokupheleleyo, kufuneka lwakhiwe ngokusekelwe kwiimfuno zomamkeli.
Imigaqo yeGestalt zisisixhobo esisisiseko, ekubeni ziluncedo ekunikeleni ingqalelo yombukeli kunye nokulungelelanisa izinto ezahlukeneyo ezibonakalayo ngendlela esebenzayo, ebangela ukuba umbukeli, xa ejonga loo mfanekiso, avuselele imvakalelo, imvakalelo, kunye nobuchule bakhe.
Njengabayili, ingcamango ephambili ekufuneka siyikhumbule kukuba kubalulekile ukuqonda indlela ababukeli, uluntu lwethu, olubona ngayo izinto kwaye yiyo loo nto iGestalt iluncedo kakhulu ukuhlalutya indlela esebenza ngayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Imigaqo yeGestalt kuyilo lwegraphic